လူကြီးများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် LEGO Star Wars set ကကုန်သွားပြီ
01 / 08 / 2021 01 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 481 Views စာ0မှတ်ချက် 40487 Sailboat စွန့်စားမှု, 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း, 75296: Darth Vader ၏တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း, Dartဇ Vader, အထွေထွေ Veers, Lego, လူကြီးများအတွက် Lego, စတော့ရှယ်ယာထဲက Lego, Lego Star Wars, LEGO.com, ပစ္စည်းပြတ်, ရောင်းကုန်ပြီ, Star Wars, စတော့ရှယ်ယာ
သြဂုတ်လ Lego အပေးအယူများနှင့် အသစ်အစုံ စတင်ခဲ့ပါပြီ၊ စျေး ၀ ယ်များသည်အသစ်များအပါအ ၀ င်သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောမော်ဒယ်များကိုအမြန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည် Star Wars 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း.
မည်သူမဆို ၀ ယ်ရန်မျှော်လင့်သည် 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း ပထမဆုံးတရားဝင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိနိုင်သောတရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါယနေ့သည်ကံကောင်းလိမ့်မည် လူကြီးများအတွက် Lego အဝေးတစ်နေရာမှနဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုမှဖန်တီးမှုသည်ရောင်းထွက်ရန်လျင်မြန်ခဲ့သည်။
ခဏတာကာလနောက်တွင် 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း ၁၈+ သည်ရက် ၆၀ အတွက်အော်ဒါမှာနေသည် Star Wars အတွေ့အကြုံသည်ယခုယာယီမရနိုင်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာစုဆောင်းသူများသည်၎င်းမှပြန်လာချိန်မတိုင်မီအချိန်ကိုကျော်ဖြတ်ရန်မိမိကိုယ်ကိုဆင်ခြင်တွေးတောရန်ကြိုးစားချင်ပေမည်။ LEGO.com.
အဲဒါတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး Lego Star Wars အခုမှဖြန့်ချိပြီး set out of stock ဖြစ်နေသလိုပဲ 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship အဲဒီစာရင်းထဲမှာလည်းပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ဒါကအလားအလာအလားအလာအနာဂတ်အတွက်လိုအပ်ချက်ရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ် Lego Star Wars မော်ဒယ် ၁၈+ နောက်ဆုံးတံဆိပ်တစ်ခုကိုဝေမျှရန်တည်ဆောက်သည် ၇၅၂၉၄ Bespin Duel ပြီးနောက်ရောင်းထွက်သွားသည် သီးသန့်ထုတ်ဝေသည် အမေရိကန်တွင်ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးနောက် Star Wars အခမ်းအနား Anaheim ။
အခါသင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အပ်ဒိတ်ပေးပါမည် 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း တစ်ကျော့ပြန်ရန်စီမံသည် LEGO.com သေချာတာတစ်ခုကတော့စျေး ၀ ယ်သူအချို့ကသူတို့ရဲ့ minifigures နှစ်ခုနဲ့အထဲမှာပါရှိတဲ့ ၆၆၃ အပိုင်းအစတွေကိုထည့်ဖို့မျှော်လင့်နေသေးတာသေချာပါတယ်။
၎င်းသည်သြဂုတ် ၂၉ မတိုင်မီပြန်လာမည်ဆိုပါက၎င်းကို ၀ ယ်ယူပါ Star Wars set သည်အခမဲ့ ၀ င်ငွေရရှိရန်သင်၏လမ်း၌ကောင်းစွာရှိလိမ့်မည် Lego Ideas 40487 Sailboat စွန့်စားမှု orders ၂၀၀ ကျော် / ဒေါ်လာ ၂၀၀ / ပေါင် ၂၀၀ ကျော်အော်ဒါများ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းကိုစစ်ဆေးပါ model အသစ်တိုင်း မင်းရဲ့နောက်အော်ဒါတွေကိုကြိုတင်စီစဉ်ဖို့ဒီနေ့တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးမှာ 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်းပြန်လာပြီ။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ငါတို့သုံးနိုင်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← Lego Marvel 76200 Bro Thor's New Asgard သည်လျင်မြန်စွာရောင်းထွက်သွားသည်
Knight Rider LEGO တစ် ဦး Ideas စီမံကိန်းသည်ထောက်ခံသူ ၁၀ သိန်းအထိရှိသည် →